छात्रवृत्तिमा पाएकाे ४ सयकाे लागि १० वर्षिय बालककाे हत्या - Lekbesi Khabar
छात्रवृत्तिमा पाएकाे ४ सयकाे लागि १० वर्षिय बालककाे हत्या
बुटवल : सरकारले दलित विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति रकम दिँदै आएको छ । आर्थिक अभावका कारण विद्यालय जान नसक्ने र विद्यार्थीलाई स्कुलमा निरन्तर ल्याउन सरकारले छात्रवृत्ति दिने गरेको हो ।
छात्रवृत्ति वापत विद्यार्थी हजार होईन केही सय मात्र पाउने गर्दछन् । तर छात्रवृत्तिको त्यहि रकम साथीलाई नदिँदा एक विद्यार्थीले भने रुपन्देहीमा ज्यान गुमाउनु परेको छ । घटना हो, ओमसतिया गाउपालिका वडा नं. ५ मा चैत ४ गतेको ।
चैत ४ गते रुपन्देहीको सिक्टन माविमा कक्षा ३ मा पढ्ने ओमसतिया गाउँपालिका–५ सपहिका ज्वाला हरिजनका छोरा १० वर्षीय आकाश हरिजनले विद्यालयबाट ४ सय रुपैया छात्रवृत्ति पाए ।
छात्रवृत्ति पाएपछि आकाश घरतर्फ हिँडे । तर ४ सय रुपैयाँ छात्रवृत्ति पाएको देखेका ओमसतिया गाउपालिका–५ कै १४ वर्षीय दिलीप यादवले हरिजनलाई पछ्याउन थाले । उनले हरिजनलाई साईकलमा घरसम्म पुर्‍याउने भन्दै विद्यालय देखि केही परसम्म साईकलमा लगेर गए ।
तर साँझ अबेरसम्म हरिजन घरमा फर्किएनन् । हरिजनका बुवाले सबैतिर खोजे । कतै पत्ता लागेन । त्यसपछि चैत ५ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीमा खोजतालका लागि निवेदन दिए । निवेदन प्राप्त पछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीको टोली खोजतालमा केन्द्रीत भयो । प्रहरीले खोजी गर्दै गर्दा ओमसतिया गाउँपालिकाकै वडा नं. ५ मा पर्ने खेतमा आकाश मृत अवस्थामा फेला परे ।
त्यसपछि प्रहरीले विद्यालयमा सोधपुछ गर्‍यो । केही विद्यार्थीहरुले हरिजनलाई साईकलमा राखेर घर लगिदिने भन्दै दिलीप यादवले लगेको प्रहरीलाई बताए । प्रहरीले दिलीप यादवलाई नियन्त्रणमा लियो ।
सोधपुजका क्रममा दिलीपले नै हत्या गरेको स्वीकार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक खड्गबहादुर खत्रीले भने ।
‘छात्रबृत्तिको ४ सय रकम हरिजनले नदिएपछि इँटा र ढुंगाले टाउकोमा हानेर हत्या गरेको दिलिपले स्वीकारेका छन्,’ उनले भने ।
हरिजनलाई हत्या गर्ने १० वर्षीय दिलीप अहिले प्रहरी नियन्त्रणमा छन् भने उनलाई बाल निगरानी कक्षमा राखिएको छ ।
१८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई अरु व्यक्ति झैं हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न नमिल्ने कानुन व्यवस्था अनुसार दिलीपलाई निगरानी कक्षमा राखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले बताएको छ ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा १४ वर्ष वा सो भन्दा माथि र १६ वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिकाले कुनै कसुर गरेको भए निजलाई कानुन बमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था छ । दिलिपलाई कर्तव्य ज्यानमा कारबाही अघि बढाईने बताइएको छ ।
८ चैत्र २०७६, शनिबार १०:२७ March 23, 2020
यी हुन चैत ९ पछि सुचारु रहने र बन्द हुने सेवाहरु
काेराेना प्रभाव : चैते दशैंको पूर्वसन्ध्यामा बडा दशैंको झल्को (फोटोफिचर)